I-1860 Museum neSam China Cup – AMANDLA!
I-1860 Museum neSam China Cup
Posted byAmandla Durban	 June 13, 2018 April 19, 2018
2 Comments on I-1860 Museum neSam China Cup
Robbie Naidoo, Nithia Naidoo, Dhilosen Pillay, Farook Khan, Dr Ashwin Desai and Vinnie Sivabhadan ngobusuku bokuvulwa kwe-1860 Museum
Ngo2016, i-1860 Museum yavula eChatsworth, KwaZulu-Natal. Le ndawo yokugcina amagugu, isungulwe nguMnu Dilosen Pillay kanti iyindawo yokuqala yalolu hlobo exhaswe ngabantu abazimele okuhloswe ngayo ukugcina umlando wabantu abangamaNdiya eNingizimu Afrika. Amagumbi ayisithupha ehhotela iSavera eChatsworth yiwona akha le museum, ezovuleleka emphakathini ukuba uzophakela ihlo. Igumbi ngalinye libheka kabanzi izikhathi ezithile emlandweni wamaNdiya, okubandakanya osopolitiki abadumile abafana noMahatma Gandhi, Ahmed Kathrada noDkt Yusuf Dadoo.
Yiqembu laseTransvaal, elanqoba iSam China Cup ngo-1961
Ukuvulwa kwale ndawo kwethanyelwe ngabantu abangaphezu kuka-200, okubandakanya uMnu Boysie Moodley, olethe indebe iSam China Cup. Le ndebe, eyanikelwa okokuqala ngumkhulu kaMoodley, yaklonyeliswa iqembu elanqoba emqhudelwaneni kazwelonke wamaNdiya, owawubanjelwa eKimberly kusukela ngo-1903. Inhlangano kanobhutshuzwayo yamaNdiya iSouth African Indian Footbal Association (SAIFA) eyasungulwa ngo-1902 yayingavunyelwe ukudlala noma ikuphi. EThekwini, iCurries Fountain kwaba iyona nkundla ehamba phambili yebhola, lapho abesilisa bezinhlanga ezahlukene babedlala ngokukhululeka. Empeleni nakuba sasimanzonzo isimo sepolitiki eNingizimu Afrika kodwa lwalukhula nobumbano phakathi kwaqembu ebhola ezinhlanga ezahlukene endawo – Isithombe sababenqobe iSam China Cup ka-1961 sikhombisa iqembu elalakhiwe ngabadlali bezinhlanga ezahlukene nabavela emasikweni ahlukahlukene. Kubukeka sengathi ibhola lezinyawo, kanjalo nenkundla yaseCurries Fountain, lalikwazi ukwenza abantu bathole ithuba lokukhohlwa kancane yimithetho enzima yobandlululo eNingizimu Afrika.
ICurries Fountain Sports Development Centre eseBerea, eThekwini esiyingxenye yoMzila Wamagugu Omzabalazo, iyaqhubeka nokudlala indima ebalulekile ekukhuthazeni ukungacwasani ngokobuhlanga, ekugqugquzeleni izinguquko kwezemidlalo eNingizimu Afrika.
Izithombe ngesihe salaba: Durban Casbah, Culture & Heritage & overcomingapartheid.msu.edu
Posted byAmandla Durban June 13, 2018 April 19, 2018 Posted inImportant People and SitesTags: Curries Fountain, Mahatma Gandhi, Sam China Cup
Masana Sam Nzima: 8th August 1934 – 12th May 2018
Amandla Durban says:
July 10, 2018 at 13:30
Yes, it is available here:
Leave a Reply to kamal singh	Cancel reply